Avy amin'ny biraon'ny MD's | Fanatanjahantena Odisha Tours & Travel
Namaskaar! ... ary faly avy amin'ny tanin'ny Tompo Jagannath ...
Bhubaneswar - tanànan'ny tempoly; Ny renivohitr'i Odisha no reniko. Odisha, voarindra amin'ny lova ara-kolontsaina, ny lovam-pananana ara-tsakafo sy ny kavina miafina dia ny fanahin'i India. Ny tempoly mahafinaritra, ireo mari-pamantarana manan-danja, ireo kirikirana mahafatifaty, ireo fitoerana masina ary ireo valan-javaboarim-pirenena dia manintona mpitsidika maro isan-karazany.
Nalaza be aho hatramin'ny fahazazako sy ny olana nahazo ahy. Izany dia nanosika ahy hampivelatra ity indostrialy ity ary hanadihady ny fahafaha-manaony izay afaka mamporisika tokoa ny mpialona na ny fanangonana mpitsidika. Izany no fitaovana entina manintona ny "Travel Child" (Sand Child Pebbles Tour 'n' Travels I) Pvt Ltd.
Amin'ny traikefako sy ny fandraisako anjara tamin'ity orinasa ity, dia nanana ny fahafahako mamory vondron'olona iray efa voaomana tsara sy efa za-draharaha izay handeha lavitra ny adidiny amin'ny fametrahana ny mpitsidika amin'ny traikefa goavana indrindra. Androany dia nanaparitaka ny elatry ny elany izahay ho any New Delhi sy Kolkata ary miasa ao amin'ny metros of India amin'ny sitrapo tsara amin'ny fanampian'ny Departemantan'ny fizahantany, governemantan'i Odisha sy ny governemantan'i India.
Ny tsara indrindra ho anareo rehetra ary miandrandra anareo any Odisha